Bullet, CronShot နှင့် Cyclops: Yahoo Open Source - အပိုင်း ၂ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 23/07/2021 06:00 | applications များ
ဒီနှင့်အတူ ဒုတိယ အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ "Yahoo Open Source" ကျနော်တို့၏ catalog ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de « Yahoo! Inc. ».
ပြီးတော့ အပိုင်း အကြောင်းကိုဒီစီးရီး၏ "Yahoo Open Source":
1 YOS-P2: Yahoo Open Source - အပိုင်း ၁
1.1 Yahoo ကပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် applications များ
1.1.3 Cyclops များ
YOS-P2: Yahoo Open Source - အပိုင်း ၁
applications များ Yahoo ၏ Open Source
စတင်ခြင်းမပြုမီတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် မှလွဲ၍ ၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် Yahoo Open Source (YOS)သင်သည်ကုမ္ပဏီ၏အခြားပွင့်လင်းသောစီမံကိန်းများစွာကို၎င်း၏တရားဝင် site တွင်လည်းတွေ့နိုင်သည် GitHub နှင့်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Open Source y ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အစီအစဉ်.
တွင်ဖော်ပြထားသောစီမံကိန်းများ၏စာရင်းမှ "Yahoo Open Source" ကျနော်တို့တှငျတှေ့ရှိသူများနှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် su စီမံကိန်းအညွှန်းကိန်းအောက်ပါ Apps များမှာ -
အတိုချုပ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အောက်ပါအကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"Bullet သည် Apache Storm, Spark သို့မဟုတ် Flink ကဲ့သို့သော flow processing framework ကိုအသုံးပြုပြီးမည်သည့်အနည်းကိန်းဒေတာစီးဆင်းမှုကိုမဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သည့်စီးဆင်းမှုစုံစမ်းရေးအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ Count Distincts, Top K နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ခက်ခဲသောမေးမြန်းခြင်းများအပါအ ၀ င်ဤအချက်အလက်စီးဆင်းမှုတွင်သင့်အားမေးမြန်းခွင့်ပြုသည်။ "
user interface နှင့် web service တစ်ခုပေးသည်။
၎င်းသည် Storm သို့မဟုတ် Spark Streaming တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းသည် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်များကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်ဆုံမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ "
Phantom JS ကို အသုံးပြု၍ ဖန်သားပြင်များကိုရိုက်ပါ။
အချိန်ဇယားဆွဲ screenshots ။
Java 8 တွင်အလုပ်လုပ်သော application များကိုရေးသားရန်အဆင့်မြင့်ပြီးသုံးရလွယ်ကူသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Java 8 အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သောတုံ့ပြန်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုသည်တုန့်ပြန်မှုအားအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်တွေ့ဆုံနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အဆင့်မြင့် multi-threaded နှင့် sequential စီးဆင်းမှု၊ functional control structure နှင့် extensions သို့မဟုတ် collection interfaces များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်အချက်အလက်များကိုအမှားများကိုကိုင်တွယ်ပြီးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထို့အပြင်၎င်းသည် JDK နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောအမျိုးအစားများဖြင့်စွမ်းအားပြည့်။ ၊
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤဒုတိယတူးဖော်ရေးအပေါ် «Yahoo Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Yahoo! Inc.».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Bullet, CronShot နှင့် Cyclops: Yahoo Open Source - အပိုင်း ၂